Andros Townsend Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Andros Townsend Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya mara; “Obodo Nọdụ”. Anyị Andros Townsend Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ọdachi ezinụlọ na ihe ndị ọzọ na-apụ apụ (amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ ọjọọ ya na Tottenham. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole maara banyere Andros Townsend's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Andros Townsend nke Childhoodmụaka Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Andros Darryl Townsend mụrụ na 16th ụbọchị nke July 1991 na Leytonstone, mpaghara dịpụrụ adịpụ nke London ebe izu efu na-akwụsị mgbe enwere bọọlụ n'ụkwụ onye ọ bụla.
Andros Townsend akụkọ nwata bụ otu n'ime nkasi obi na-ejikọ ọdachi ezinụlọ ya na mkpebi siri ike ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe omimi, ọ bụkwa akụkọ banyere onye na-eto eto na onye nwere ọgụgụ isi bụ onye ghọrọ onye nwere nnukwu onyinye pụrụ iche.
A mụrụ Townsend nne ya, Katerina Erodotou nke agbụrụ ndị Greek Cypriot na nna, Troy Townsend nke ụmụ Jamaica. Na-etolite, ọ gara Rush Croft Sports College nke nyere ya ohere ịme bọọlụ asọmpi n'oge oge egwuregwu.
Ndị maara Townsend dị ka nwatakịrị na-ekwu okwu banyere onye kpebisiri ike nke nwere ọchịchọ na-agụsi agụụ ike ịga nke ọma. Site na nwata, o doro anya na Andros nwere nkà na ụgbọala, ma ọrụ ya na-eto eto na-enwekwa ọrụ nlekọta na ọrụ onwe ya.
Mgbe Townsend bụ 10, nwanne ya nwoke bụ Kurtis - onye bụ 18 - nwụrụ n'ụgbọala mgbe ọ na-eme njem iji kpọọ egwuregwu maka Cheshunt FC.Pictured n'okpuru bụ foto nke Kurtis.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Townsend's football tutelage malitere n'oge ọ bụ nwa ọhụrụ na nna ya na nwanne ya nwoke bụ nnukwu Kurtis duziri ya nke bụ nwa nwoke nna ya mụrụ na onye mmekọ mbụ ya bụ Maria.
Kurtis nwụrụ afọ 18 n'ihe mberede ụgbọ ala na Disemba 15, 2001, ka ya na ndị otu egwuregwu atọ na-ebugharị ya ka ha gaa egwuregwu maka Cheshunt FC, n'akụkụ Troy jisiri ike n'oge ahụ. O di nwute na ezin ul o, obu nan i onwu ihe mberede ah u n’agbanyeghi n ’od u na-ano n’oche azu.
Andros Townsend Biography - Na-ewu Onwe Ya:
Hale End Sports Sports kpụrụ Andros Townsend. A na-ahụ ya nke ọma na windo nke ụlọ a na-edozi nke ọma. Ọ bụ n'ubi a ka ndị na-eto eto bụ Andros ga-eso ndị enyi ya gwuo egwu mgbe ha gụsịrị akwụkwọ. N'ụtụtụ Satọdee ọ ga-aga maka nkuzi Greek n'ụlọ akwụkwọ ya, Rush Croft Sports College, na nne nne ya.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Andros papa debara aha nwa ya nwoke maka Ridgeway Rovers dị ka nwata. Nke a bụ otu ụlọ ahụ Beckham na Harry Kane Egwuru Ọbụna ọ na-egwuri egwu megide onye otu egwuregwu ọhụrụ Jonjo Shelvey, bụ onye nọ na Charlton mgbe ha abụọ bụ ụmụaka.
Andros Townsend ghọrọ onye otu ndị Spurs n'oge ọ dị afọ iri na ụma. N'ụzọ dị mwute, mgbe ọ dị afọ 15, a tọhapụrụ ya.
Ekele dịrị Chukwu, a kpọghachitere ya ka ụbọchị abụọ gachara mgbe edochiri ndị nkuzi ochie ya na ndị ọhụrụ chetara ya.
Na-agbaso usoro nhazi nke nhazi Nathan Gardiner na Poch, Townsend gbagara Newcastle wee mesịa gaa Crystal Palace. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Hazel O'Sullivan Storyhụnanya Akụkọ na Andros Townsend:
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị England niile na-agba ọsọ, e nwere nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma. Mmekọrịta dị n'etiti Andros Townsend na Hazel O'Sullivan wepụrụ ha n'ọnọdụ kachasị mma gaa ezi ịhụnanya.
Amụrụ enyi nwanyị Townsend bụ Hazel mụrụ na 18th nke December 1988 na Dublin, Republic nke Ireland na nne na nna Audrey O'Sullivan (nne), Jim O'Sullivan (nna). Ọ bụ afọ 3 karịa nwoke ya. Kemgbe oge okpomọkụ nke 2013, Hazel O'Sullivan amaara nke ọma na England n'ihi na o sonyere na Big Brother n'asụsụ Bekee.
Tupu Townsend abata na foto ahụ, O'Sullivan nwere mmekọrịta na Fergus McFadden ruo oge ọkọchị nke 2013. Tupu nke ahụ, ya na onye bụbu ọkpọ ọkpọ nwere mmekọrịta. Darren Sutherland tupu ya agawa na Andros Townsend.
Hazel O'Sullivan bụ onye na-eche na Football Manager bụ ezigbo. Onye ha na Andros Townsend bụ Hazel O'Sullivan boro ya ebubo na a ga-akwụ ya ụgwọ maka ọzụzụ na-efu ma ghara ịkọ na Fraịdee, naanị ịmata na ihe ahụ mere na Football Manager dị ka agbadoro n'okpuru.
Ndụ Andros Townsend Ezinụlọ:
Townsend na-adọta ihe nketa nna na Jamaica na ihe nketa nne na si Cyprus. Ọbụna tupu ya anwụọ Kurtis nwanne ya nwoke nke okenye, Andros na-akwado nkwado ọ bụla nke nna ya, Troy.
Nna: Ihe ncheta football nke Troy kacha mma nke nwa ya nwoke rue ugbu a ma na-ele nwa ya nwoke ka o buru ihe mgbaru ọsọ Premier League.
Ezinụlọ Andros Townsend enwetawo oge siri ike n'oge nke ọ dị ka akara aka nke Andros yiri ndakpọ olileanya sochiri nna ya bụ onye bụbu onye mmeri na Crystal Palace n'otu oge ahụ Teddy Sheringham nọ ebe ahụ.
Tozọ a ga-esi mara ama dị ogologo nke Townsend jnr. Tottenham zigara ya na ntinye ma ọ dịkarịa ala klọb itoolu n'ime afọ anọ. Nke a na-ewetara nna ya ncheta ncheta ncheta dị otú ahụ siri ike, bụ nke dujere ya ma eleghị anya wepụchaa ọtụtụ ebe ndị siri ike.
Mgbe Troy Townsend na-egwu egwu na-abụ ụbọchị efu, ọ malitere ịzụlite nghọta nke ịzụ ihe. Ọ ghọrọ onye nlekọta nke Chesham United na Buckinghamshire, ebe ọtụtụ na-echeta ya maka ịbịa otu afọ, tupu Christmas, mgbe ụlọ ọrụ ahụ nwere nanị isi itoolu n'elu ụgbọ ahụ, ma hụ na ha na-agbapụ mpaghara mpaghara ahụ - naanị ka ha daa lụọ n'ihi ego n'ụzọ dị iche iche karịa nke aka ya.
Ọ bụ mgbe nwa ya nwoke malitere ịrụ ọrụ n'egwuregwu ahụ na o kpebiri na ọ ga-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ niile ka o wepụta oge iji nyere ya aka.
Nchegbu Troy Townsend na-echegbu onwe ya bụ nke nna ọ bụla n'ihi na ọ na-eche na ya emebeghị ihe zuru oke iji nyere nwa ya nwoke aka dị ka Harry Kane.
Nne: Katerina Erodotou nne nke Andros Townsend n'akụkụ nwere ihe nketa Cypriot na Greek. Ọ bụ nne Late Kurtis na Nadine. A mụrụ nwa ya nwanyị aha ya bụ Nadine n'otu ụbọchị (August, 28th) na nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ, Kurtis.
Maka ezinụlọ Andros Townsend, afọ ojuju na-enwe afọ ojuju kwa ụbọchị na ụbọchị ọmụmụ ụbọchị Nadine. Ezinaụlọ mere emume ncheta 10th nke Kurtis n'oge ọnwụ ya.
Eziokwu Andros Townsend - Music:
A na-esere Townsend abụ abụ Kwụrụ n'akụkụ m by Ben E. Eze tinyere ndị ntorobịa Tottenham ndị ọzọ na-eji ejiji, nke ghọrọ ihe ngosi vidio a ma ama.
Andros Townsend Ime Anwansi:
Internetntanetị na-eme mkpọtụ n'ihi Townsend onye ọtụtụ chere na ya na nwanne ejima ya nke nwere anwansi na-abanye na ịntanetị afọ ole na ole gara aga.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Andros Townsend Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Akwụkwọ Mgbasa ozi Crystal Palace
Alexander Sorloth Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ